" सबै साथीहरूको सल्लाहमा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए " : दिनेश गिरी - VOICE OF NEPAL
” सबै साथीहरूको सल्लाहमा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए ” : दिनेश गिरी
१६ भाद्र २०७६, सोमबार १४:४५
399 ??? ???????
भोला लामिछाने, बार्सिलोना ।
“हामी काम गर्छौ सधै ब्यस्त हुन्छौ फुर्सद को समय त पाउदैनौ त्यही माथी पारीवारीक व्यस्थापन समय मिलाउनै पर्यो आफ्नो व्यवसाय पनी हेर्नुपर्यो सारा कुराहरू सकाएर मिलाएर भए पनी आफ्नो बुताले भ्याएसम्म नेपाली समुदायका लागी समय छुट्यएको छु , विदेशी भुमीमा संघर्ष गर्दै आफ्नै दुखहरूलाई यतातिर छोडेर नेपाली समुदाय भनेर हिडीरहेका छौ सबै साथीहरूलाई था छ नी सर मैले भन्नु पर्दैन सबै साथीहरूले अगाडी बढ्नु भन्नु भयो म झन हैसीएको छु। “,गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेनको छैठौ अधिवेशनका लागी उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका दिनेश कुमार गिरीले आफ्ना कुराहरू राखे ।
गिरी स्पेनमा लामो समय देखी बस्दै आएका सफल व्यवसायी हुन् । गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेनको सचिव पदमा सफल कार्यकाल पुरा गर्दै आउने छैठौ अधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा आउन लागेका हुन । यसको अलावा स्पेनमा रहेका सबै संघ संस्थाहरू मा सहयोगीको रूपमा लोकप्रीय प्रतिनिधी पात्र हुन गिरी । “म स्वतन्त्र रूपमा लागेको छु, तर जुन सुकै साथीहरूले पनि आफ्नो समूहबाट राखेर साथ समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ, म तयार छु.” उनले भनेका छन् ।
सचिव पदका लागी धेरै मत ल्याएर विजयी भएसगै गिरीले स्पेनमा रहेका नेपाली समुदायप्रति आफ्नो ज़िम्मेवारी थप भएको महशुस गरेको बताएका छन्। ” यो २ वर्षमा मबाट सकेको सहयोग गरेको छु जस्तो लाग्छ, आगामी दिनहरूमा मेरो पाईलालाई निरन्तरता दिने प्रण गरेको छु। यसको लागी सबैले भोट दिनु भयो भने म अझ यस क्षेत्रमा निरन्तर लाग्ने छु ।” गिरीले भोइस अफ नेपाललाई बताए।